အိန်ဒိယ ရေကာတာ ဆည်များ – INDIAN DAMS AND RESERVOIRS II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » အိန်ဒိယ ရေကာတာ ဆည်များ – INDIAN DAMS AND RESERVOIRS II
အိန်ဒိယ ရေကာတာ ဆည်များ – INDIAN DAMS AND RESERVOIRS II
Posted by Kyaemon on May 27, 2012 in Education, Know-How, DIY, Photography, Think Different, Travel | 8 comments
india India Dams and Reservoirs
Narmada နာမဒါ ရေကာတာ ကြီး သို့ ခရီးစဉ်
၁၉၅၀ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင် လောက်က စတာ၊
ဝန်ကြီးချုပ် Nehru နီရူ က “တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ
ရေကာတာတို့ဟာ ဘုရား ကျောင်းကန် စေတီတွေ (အလား) ဖြစ်ကြတာ”
Narmada နာမဒါ ရေကာတာ က အစ ၃၀၀၀ လုံးရေရှိ ရေကာတာ အကြီး အငယ်တွေ စတော့တာ၊
သန်းတထောင် ကျော် လူဦးရေ ရပ်တည် နေနိုင်အောင် ရေကာတာကြီးတွေ လိုအပ်တာ၊
ပြည်နယ် ၃ နယ် နေ သန်း ၂၄ သန်း ရှိ လူဦးရေ အတွက် ရေ နဲ့ဓာတ်အားရယူဘို့လိုတာ၊
တိုင်းပြည်တိုးတက်ဘို့လူ ၅ သိန်း နေရာပြောင်းရတာ က အနစ်နာခံ(အရင်းအနှီးစိုက်) ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပါဘဲ
လို့ ရေကာတာ တည်ဆောက်ဘို့ လိုလား သူတွေက ပြောကြတာ
My Narmada Travel
It started in the 1950’s when India’s first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, called dams the “temples of modern India.” Dam building was equated with nation-building, and the Narmada Valley Development project,aseries of 3000 large and small dams, was initiated.
Proponents say large dams such as the Sardar Sarovar are needed to sustain India’s population of over 1 billion.Officials hold that the dam will bring over 24 million people in3states water and power. They say that displacing some 500,000 indigenous people is the price India must pay for progress.
မကြေးမုံပေးလို့ တဲ့ main message လေးကိုသိပါရစေ။ ကောင်းတာလား ဆိုးတာလား???
တရုတ်သူလျှို ကြေးမုံဂျီးဆိုမှဒေါ့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ဘယ်ဒုံးဂ ကောင်းဗူးလို့လဲ…။
မြစ်ကိုပိတ်ပြီး ရေကာတာဆောက်တာ… တောင်ကိုဖေါက်ပြီး.. လမ်းဖေါက်တာ…
ဆိုးကျိုးနဲ့..ကောင်းကျိုး.. ချိန်ဆရင်.. ကောင်းကျိုးရာခိုင်နှုန်းပိုတာ.. သေချာပါတယ်..
မြန်မာပြည်ထဲ.. ပုဂံက.. မြကန်ဆိုတာ.. တဖက်ပိတ်ရေကာတာပေါ့..
မြန်မာတွေ.. ကန်ဆောက်ဆည်ဆောက်တာ.. ၀ါရင့်ပါတယ်…
နံ့မျိုးစုံသည်၊ ဘုံဝတိံသာ၊
နောက်တနေရာ က ပြတဲ့ အိန်ဒိယနိုင်ငံက
ရေကာတာ ဆည် အကြီးဆုံးတွေကို ကြည့်ဘို့ link လင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ၊
ပုံတွေက တော်တော် ခန့်ညားထယ်ဝါတာ
ခရီးတထောက် အရောက်သွားလည် သလိုဘဲ၊
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Nehru နီရူ က အားတက်သရော ဆိုခဲ့တာ က
“တဟုန်ထိုး ပြန်လည် တိုးတက်လာတဲ့ အိန်ဒိယ နိုင်ငံ အတွက် ရေကာတာတွေဟာ
ဘုရားကျောင်းကန် တမျှ ( အကျိုးပြုတာ မြတ်နိုး အားကိုးရတာ၊)”
(အကြောင်းမှာ) ရေကာတာတွေကသန်းချီသော ပြည်သူတွေဆီသို့
ရေတွေ ဓာတ်အားတွေကို ဖြည့်တင်းပို့ဆောင် ဘို့ကူညီပံ့ပိုးကြတာ
Hailed as the “Temples of Resurgent India” by Pandit Jawaharlal Nehru, the country’s dams help provide water and electricity to millions citizens. We look at some of the biggest
သူများနိုင်ငံကရေကာတာ တွေ ဆောက်တာ..ကောင်းတယ် ဆို တာ ကလည်း ဆောက်လုပ်တဲ့ ပညာရှင်တွေ ကလည်း သေသေချာချာ ရေရှည် အကျိုး စီးပွားကိုတွက်ချက် ပြိးဆောက်လုပ် ကြလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်. ဒီမှာ ဆောက်တဲ့ရေကာတာတွေ ကတော့ ရေရှည် အကျိုးစီးပွား ကို မ၇ည် ၇ွယ်ဘဲ ဆောက်လုပ်ခွင့် ရရှိတဲ့ သူတွေ နဲ့ ဆောက်လုပ်ခိုင်းတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း တွေ ရဲ့ အကျိုးစီးပွားတစ်ခု ထဲကို ဘဲ ကြည့်ပြီးဆောက်လုပ် ထားတာ ဖြစ်နေလို့ ..အများကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတာတောင်မှ အခုထိကို အကျိုး မဖြစ်ထွန်းသေးပါဘူး .၀န်ကြီးငှာန တွေက အလုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ကလည်း ဘက်ဂျက် ရန်ပုံငွေ ထုတ်လို့ ရအောင် လုပ်နေတာ ဖြစ်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ဆိုတာကလည်း ၀န်ကြီးငှာန မှ အကြီး အကဲများနှင့် မကင်းရာ မကင်းကြောင်းတွေဘဲဖြစ်နေပြီး မြန်မာပြည်မှာ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေ ပါဘဲ..၀န်ကြီးအဖွဲ့ အစည်း နဲ့ တကွ ပတ်သတ်ရာ ခရိုနီ တွေ အကျိုးစီးပွားများများရအောင် လုပ်ဆောင် နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကသာ များပြားနေပါတယ် ။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း တံတားတွေများ လာတယ် ဆည်တွေ များလာတယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေ များလာတယ် စက်ရုံတွေများလာတယ် လမ်းတွေ များလာတယ် ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းလိုင်းတွေများလာတယ် ..အကျိုးအမြတ်တွေက တော့ဘယ်သူတွေ ပိုရလာသလဲ…အခုချိန်ထိ မီးမမှန်သေးပါဘူး လမ်းမတွေပေါ်မှာ အ ပျက်စီး တွေ များတုန်း မိုးရွာရင် ရေလျှံ
ပါတယ်.. ဖုန်းတွေ ၀ယ်ကိုင် လိုက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေ ဆုံးရုံးခဲ့ တာပါဘဲ..သိန်း လေးဆယ်ကျော်ထိပေးဝယ်ခဲ့ ရတဲ့ သူတွေ အများ
ကြီး ပါ.. အဆင့်ဆင့် ရူံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေ အများကြီးပါဘဲ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု့ ရှိလာပြိဆိုရင်တော့
၀န်ကြီးငှာန တွေ၇ဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင် ရွက် မှု့ တွေ ကို တရားဝင်ပြည်သူကို အသိပေးပြီး လုပ်ဆောင် သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကုန်ကျမှု့ နဲ့ အကျိုးအမြတ် ကို အများပြည်သူ တရားဝင်တွက်တာ မျိုးဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အခု လုပ်ဆောင်နေတယ် လမ်းတွေဖောက် တံတားတွေ ဆောက် ဆည်တွေ ဆောက် မြောင်းတွေ ဖောက် လုပ်ချင်တာတွေ လုပ် အားလုံးဟာ လူကြီးတွေ နဲ့ 
ပတ်သတ် ရာ ပတ်သတ် ကြောင်းတွေ ခိုးဖို့ အတွက် တစ်ခု ဘဲ ဦးတည် ပြီးလုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် တစ်ခု မှ
အကောင်းဖြစ်မလာတာ ပါ နိုင်ငံငွေတွေ ဆုံး၇ူံး ပြိး တော့ အကျိုးပြန်မရ တာ ကတော့ နိုင်ငံအတွက် တော်တော် နစ်နာပါတယ်။
အဲ့ဒီ လုပ်ငန်းတွေ ကဆုံးရူံးမှု့ တွေ ကို ဘယ်သူက တာဝန် ယူမှာလည်း …..
တာဝန်သိစွာ နဲ့ အများအကျိုးကိုရှေ့ထားပြီးပြောတာကိုလေးစားအပ်ပါတယ်၊
ပြသနာအရင်းခံဂဒေါ့ တရုတ်ကြီးဗဲ…။ အဖြေသိဗီဆိုဒေါ့ ပဟေဠိဖွက်တမ်းလုပ်ပီး လူဒဂါဂို ဆြာဂျီးလုပ် လိုက်မေးဗေဒေါ့…